बढ्यो अमेरिकी डलरसहित सबै देशको मूल्य, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? Canada Nepal
बढ्यो अमेरिकी डलरसहित सबै देशको मूल्य, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
काठमाडौं - आइतबार नेपाली बजारमा धेरैजसो सबै देशका मूल्य बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ११५ रुपैयाँ ०९ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २७ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी एक अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ७७ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ७७ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी आज एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय ३ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ५ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ ।
आज एक युएई दिरामको खरिददर ३१ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ७६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ७८ रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ ।त्यसैगरी एक साउदी रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ ५३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४७ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १४७ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ ।। त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ ।
मंसिर १५, २०७६ आइतवार ०४:५१:०० बजे : प्रकाशित